Askari katirsan Ciidamada Dowladda Oo qof shacab ah ku dilay Muqdisho. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Askari katirsan Ciidamada Dowladda Oo qof shacab ah ku dilay Muqdisho.
On Dec 4, 2019 458 0
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo kulmisay Malaayiin dad ah oo u badan dabaqad hoose ayaa waxaa had iyo goor ka dhaca tacaddiyo ay geystaan ciidamada Dowladda Federalka ah.
Habeenkii xalay waxaa agagaarka Kulliyadii hore ka dhacay fal ay dadkii goob joogga ahaa ka argagexeen kadib markii askari ka tirsan ciidamada dowladda uu si bareer ah u toogtay wiil dhallinyaro ah oo ku shaqeysanayay Mooto Bajaaj.
Wiilkan ayaa waxay askartu ka dalbadeen lacago baad ah, isagiina wuu ka meer-meeray wuxuuna u sheegay in canshuur laga qaado mar walba sidaa darteedna uusan awoodi karin inuu bixiyo lacag sharci darro ah, taasoo keentay in la dilo.
Goobjooge ayaa Warbaahinta u sheegay in wiilka darawalka ah laga toogtay madaxa iyo laabta islamarkaana uu goobtii ku quur baxay. Ciidamada DF ayaa todobaad walba dil u geysta dhallinyarada ku shaqeysata Mooto Bajaajta.